I-Sunny House ene-sauna - I-Airbnb
I-Sunny House ene-sauna
Bistrica ob Sotli, Šmarje pri Jelšah, i-Slovenia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Matej
U-Matej uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
I-Sunny House izungezwe ngemvelo enhle futhi ilungele ukubaleka ngempelasonto noma ukuhlala isikhathi eside. Indawo yokuhlala ifakwe kuvulandi, ifakwe indawo yokuhlala, igumbi lokuhlala elinosofa kanye ne-TV enesikrini esiyisicaba kanye neziko. Sinendawo yokudlela nekhishi, elifakwe umshini wokuwasha izitsha nohhavini. Kukhona indlu yokugezela yangasese eneshawa yokugeza umzimba kanye ne-sauna kanye nesomisi sezinwele. Kuhlinzekwa amathawula nelineni lombhede. I-Sunny House ihlanganisa ne-barbecue. Esitezi esingaphansi kunendawo yokuzijabulisa enekhishi nendlu yangasese. Siphinde sibe ne-inflatable pool eduze kwendlu yethu.
I-Bistrica ob Sotli isekhoneni elicashile leningizimu ye-Styria, onqenqemeni olusempumalanga ye-Slovenia, lapho umhlaba uvulela khona iZagorje yesi-Croatian ngasemngceleni we-Sotla.
Emigwaqweni nasezindleleni abahambeli abake babayisa eziNtabeni Ezingcwele, izimpawu eziningi zamatshe sikhunjuzwa kithi esikhathini esidlule.
Ngenxa yamagugu awo emvelo ahlukahlukene kanye nezindawo ezilondoloziwe zezitshalo nezilwane nangenxa yamagugu awo akhethekile, wonke umasipala wase-Bistrica ob Sotli usepaki lesifunda i-Kozjansko.
Kunikezwa imisebenzi eminingana endaweni, efana negalofu, ukugibela amahhashi nokuhamba ngebhayisikili. I-Terme Olimia iku-13 km ukusuka e-Sunny House, e-Tuheljske Toplice eqhele ngamakhilomitha angu-18 kanti i-Terme Čatež iqhele ngamakhilomitha angu-29 ukusuka endaweni yethu.
I-Terme Olimia ne-Terme Tuhely ziseduze nekhona (cca. 10 km away). Inxanxathela yamachibi okubhukuda angaphandle ihlanganisa ichibi lamagagasi, ichibi lezingane elinamaslayidi amanzi nezinganono zamanzi, ichibi lothunjana elinabaphathi, amathoyizi nezifafazi ukuze bathole okuhlangenwe nakho okujabulisayo kwamanzi, ichibi lokuphumula elinamanzi ashisayo, imibhoshongo yamanzi, nokubhucungwa kwamanzi ngaphansi kwamanzi.
My name is Matej and I am the owner and host of Sunny House. I have met a lot of great people from all over the world while working in tourism.
Since I get a lot of reservatio…
Sinikeza izivakashi zethu indawo kodwa siyatholakala uma sidingeka.